Mobilada Xayuubiyay Miisaska Dilka ee emaylka | Martech Zone
Mobilada Xayuubiya Miisaaniyada E-mayl Ayaa Furmaya
Talaado, Juun 19, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Adam Yar
Ma rumaysan karo inaan ka duwanahay dadka badankood. Waxaan ku hubiyaa emailka maalintii oo dhan taleefankayga iPhone-ka si marka aan shaqada u soo baxo, waxaan diiradda u saari karaa arrimaha ugu muhiimsan. Aaladda moobilku waa aaladdayda koowaad ee furitaanka iyo abaabulka farriimaha aan helo. Dabcan, ma dhaawici karto markii emaylladaas loo hagaajiyo aaladaha moobaylka. Haddii aad u baahan tahay xoogaa gargaar ah oo dheeri ah oo ku saabsan helitaanka emaylkaaga moobiilka saaxiibtinimo leh, hubi inaad soo dejiso Sida Loo Sameeyo Emailkaaga Saaxiibtinimo.
Macaamiisha waxay ka helayaan emayl dhowr meelood iyo aalado. Waxay u badan tahay, iimaylkaagu inuu garaacayo sanduuqa ay ku jiraan ee 'Gmail', oo uu shidaayo moobiilkooda, ayna suuragal tahay in loo gudbiyo koontadooda shaqo. Laakiin miyaad ogtahay halka ay dhagaystayaashaadu furayaan emaylkaagii ugu dambeeyay?
Tani infographic laga soo qaaday Litmus waxay bixisaa caddeyn ah in hirarku aakhirkii isu beddelay oo moobiilku ka batay macmiilka iimaylka kombuyuutarka ah!
Tags: emailemaylka iphoneliifemaylka gacantanaqshadda emaylka gacantatirakoobka emaylka gacanta
Gabi ahaan Awe.sm Falanqaynta Warbaahinta Bulshada